Tabaha looga ilaaliyo timaha iyo maqaarka barkada dabaasha chlorine | Ragga Stylish
Tabaha looga ilaaliyo timaha iyo maqaarka koloriin barkadda
Fausto Ramirez | | Daryeelka shaqsiyeed
Waxaa lagugula talinayaa inaad qubeysatid ka hor intaadan galin barkad. Saameyn ahaan, tani waxay ka saareysaa wasakhda taagan heerka cagaha ka bixitaanka barkadda. Dhammaan barkadaha dadweynaha, waxaa ku yaal qubeysyo ay ku qoyaan ka hor inta aysan biyaha gelin.
Sidaa si la mid ah, waxaa lagugula talinayaa inaad ku qubeysatid mar barkadda barkadda si aad uga takhalusto inta ugu badan koloriin maqaarka iyo timaha. Waa inaad dhaqdaa isla marka aad ka soo baxdo biyaha ka dibna mar labaad ku qubeysaa saabuun iyo shaambo si aad uga saarto wixii koloriin ah ee jirka ku harsan.
Fuuq baxa maqaarku waa mid kale oo ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee lagu ilaaliyo piel ee koloriin barkadda. Qubayska kadib, kareem qoyan ama caano ayaa la marinayaa jirka iyo wajiga si looga hortago in maqaarku qalalo.
Si la mid ah, maqaarka oo la sii daayo waxay ka caawineysaa in laga saaro wixii haray koloriin iyo waliba unugyada dhintay. Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa in ficil-celinta xad-dhaafka ah ee xad-dhaafka ah ay tahay in la dayaco si looga fogaado in si aad ah loo dareensiiyo maqaarka oo aan looga gaashaaman fallaaraha qorraxda.
Xaaladda meesha lagu arko furuuruc caleemaha ama nabarro ay sababeen koloriin, waa inaad la tashataa dhakhtarkaaga ama dhakhtarka maqaarka si uu u darso kiiskaaga. Sidaa si la mid ah, iska ilaali inaad naftaada si aad ah ugu bandhigto biyaha koloriin ku jirta si maqaarku uusan u dhib badan.
Si loo ilaaliyo timo Laga soo bilaabo koloriin, ikhtiyaarka ugu fiican wuxuu noqon karaa inaad xirto dabbaal dabbaal, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya barkadda ama aad u maydhashada aad u badan. Sidan ayaad uga fogaanaysaa inaad ku xanuunsato kiimikooyinka ku jira biyaha barkadda.
Waxa kale oo jira alaabooyin loogu talagalay in lagula dagaallamo saamaynta taban ee koloriinku ku leeyahay timaha. isticmaalka a qaboojiyaha sidoo kale waa fikrad wanaagsan in timaha lagu ilaaliyo xaalad wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Tabaha looga ilaaliyo timaha iyo maqaarka koloriin barkadda
Cawl iyo buluug - Elegence iyo freshness xagaagan
Sidee loo sameeyaa saliida gadhka?